Hexagonal Gabion Bhokisi
Imbwa Crate Yaiba
Ndeupi Saizi Yehuku waya Ini Ndinofanira Kushandisa?
Waya yehuku inouya mumatanho akasiyana. Guages ​​ndiko kukora kwetambo uye kwete saizi yegomba. Iyo yakakwira geji, iyo yakatetepa waya. Semuenzaniso, Unogona kuona 19 gauge waya, iyi waya inogona kunge ingangoita 1mm gobvu. Neimwe nzira iwe waigona kuona 22 Gauge waya, inogona kuve appr ...
Nzira yekusarudza saizi dhayamita yehuku yewaya?
Waya yehuku ine gaji dzakasiyana. Guage zvinoreva ukobvu hwetambo uye kwete saizi yegomba. Iyo yakadzika geji, inowedzera waya. Semuenzaniso, 19 gauge waya, iyo waya inogona kunge ingangoita 1mm gobvu. Neimwe nzira iwe waigona kuona 22 Gauge waya, inogona kuve ingangoita 0.7mm thic ...
Isu tanga tiri kuBatimat kuratidzira kuratidza yedu yakakomberedzwa waya pajira riya, welded waya pajira riya, chian chinongedzo waya pajira riya, gadheni fenzi, bindu regedhi kune vese shamwari kune vese pasirese. Zvigadzirwa zvedu zvaizivikanwa kwazvo pakuratidzira uku.
Musiyano uripo pakati penzvimbo diki yakakomberedzwa netambo uye rinorema-basa hexagonal waya mesh?
Iyo inorema-basa hexagonal mambure inogadzirwa neakakurudzira simbi waya kana epurasitiki-yakavharwa simbi waya. Iyo mesh ine hexagonal, uye waya dhayamita iri pamusoro pe2.0 mm uye pasi pe4.0 mm. Iyo yakarukwa uye inogadzirwa neinorema yakatwasuka gabion muchina. Inowanzo shandiswa kuchengetedza mvura. Iyo purojekiti yakaiswa o ...
Iwe unoziva here kuti tingashandise sei hexagonal waya mesh?
Hexagonal waya pajira riya inogona kushandiswa sewaya mesh yehuku netsuro, yakagadzirwa yakaderera-kabhoni simbi waya, ine yakasimba mesh chimiro uye yakatetepa pamusoro. Inoshandiswa zvakanyanya mukugadzirwa kwemaindasitiri uye zvekurima sekusimbisa uye kupisa. Inoshandiswawo sewaya yehuku yehuku, fi ...
Iwe unoziva here nguva yebasa yefence fenzi?
Nekuda kwe hinge yekubatanidza fenzi inoshandiswa munzvimbo ine hunyoro, ngura uye ngura zvichaitika. Inguva yakareba sei iyo inogona kushandiswa zvakajairika? Iwo ekugadzira munda fenzi & mombe fenzi kazhinji ine magetsi kwakakurudzira waya, inopisa kwakakurudzira waya, kuifukidza Galfan simbi waya, 10% aruminiyamu zingi al ...
Kushanda Kwe Welded Wire Mesh Panel
Kazhinji, ivo anoshandiswa zvakanyanya muindasitiri uye zvekurima nekuti vane zvakajairika mukana wekusimba ngura kuramba, yakanaka asidhi uye alkali kuramba uye hupenyu hwakareba. Uye zvakare, chengetedzo fenzi, maruva uye zvirimwa fenzi inogadzirwa nemarudzi akasiyana siyana ePVC poda yakasaswa pamusoro ...
Hexagonal waya pajira riya imwe waya pajira riya pamwe hexagonal hole.This mhando hexagonal waya pajira riya rakarukwa nesimbi waya, yakaderera kabhoni simbi waya kana Stainless simbi waya.Pamusoro kurapwa kunogona kuve kwemagetsi kwakakurudzira (inonziwo kutonhora kwakakurudzira), kupisa kwakanyikwa kwakakurudzira. Kana iwe ukasarudza hot di ...
Welded waya pajira riya is welded ne iron waya, kabhoni simbi waya. Iyo mesh gomba rakaenzana.Surface kurapwa inogona kuve yemagetsi kwakakurudzira, inopisa yakanyorova kwakakurudzira uye pvc yakavharwa. Yakanakisisa anti-ngura ndeye pvc yakavharwa simbi waya mambure. Maererano nechimiro che Welded waya pajira riya, rinogona devided kupinda welded waya pajira riya ...
Exhibition kunokosha chaizvo kuti company.We edu kuratidza pashoo gore.Here mumwe kuratidzwa kuti takabatana. Tiri paBatimat muna 4 ~ 8, Mbudzi, 2019 BATIMAT, inoratidzira zvivakwa zvegore negore muParis, France, yakarongedzwa neReed Exhibitions Group, iyo yakabudirira kubata makumi matatu ...